Umzali uncamela iduve ekhaya ingane ‘efeyilisiwe’ | IOL Isolezwe
Umzali uncamela iduve ekhaya ingane ‘efeyilisiwe’
Isolezwe / 29 January 2013, 10:37am / THEMBA NTSHINGILA
UNKK Zandile Shange nendodana yakhe u Sandile Shange okuthiwa ufeyiliswe othisha basesikoleni i Margot Fonteyn Secondary eKlaarwater. Unina usencamele ukuthi indodana yakhe iduve ekhaya uma kungukuthi uthishanhloko wakulesi sikole akafuni ukuthi ayidlulisele kwa Grade 12
UNKK Zandile Shange nendodana yakhe usandile Shange okuthiwa ufeyiliswe othisha basesikoleni abefunda kuso iMargotfonteyn Secondary eKlaarwater. Unina usencamele ukuthi okungenani ingane yakhe iduve ekhaya uma kungukuthi uthishanhloko wakulesi sikole uyenqaba ukuthi ayidlulisele kwaGrade 12. Isithombe: BONGIWE ZUMA
UFUNA idluliselwe ngenkani kwaGrade 12 ingane yakhe unina womfundi othi uthishanhloko uyifeyilise ngamabomu ngoba engayithandi.
UNkk Zandile Shange ongunina kaSandile Shange obefunda uGrade 11 esikoleni iMargot Fonteyn Secondary eKlaarwater, uthi okushiwo uthishanhloko ukuthi ingane yakhe ifeyilile, kuyaphambana nalokho akhonjiswa khona yiphini lakhe ngemiphumela yengane yakhe.
Uthe okumphatha kabi nokumcasula kakhulu, yisenzo sikathishanhloko sokwenqaba nokuthi abone amaphepha okuhlolwa kokuphela konyaka kwengane yakhe abemakwa ukuze azibonele ukuze akholwe wukuthi ifeyile ngempela.
Ngendlela acasuke ngayo, uthe uncamela ukuthi ingane yakhe iduve ekhaya unyaka wonke uma ingasitholi esinye isikole kunokuthi iyophinda uGrade 11 kulesi sikole.
“Uthishanhloko ungitshele ukuthi angazi lutho ngoba angifundile futhi angizange ngifundele ukuba wuthisha ukuthi ngingafuna ukubona amaphepha engane yami abemakwa,” kusho uNkk Shange ngentukuthelo.
Ngokwakhe, ingane yakhe ibisebenza kahle kakhulu ngoba bekungakaze kufike sikhalo esivela kothisha ukuthi kukhona lapho ebingenzi kahle khona.
“Into engenza ngincamele ukuthi ihlale ekhaya, wukuthi usezothola ukuhlukumezeka kulesi sikole ngoba ngiyabona ukuthi kusho ukuthi kuliwa naye ngoba omunye uthisha ungikhombise kwi-computer imiphumela engafani naleyo esemaphepheni abemakwa kodwa wayichitha leyonto uthishanhloko ngokuthi athi ngenziwa wukuthi angifundile,” kuzikhalela yena.
UMnuz Bhekisisa Ndlovu uthishanhloko wakulesi sikole, uthe ulwazi kahle udaba lukaNkk Shange, nokuthi balukhulume kakhulu naye kodwa wangafuna ukulalela.
“Akuyena yedwa. Baningi abazali abenza njengaye abafuna ukuthi kuphasiswe izingane zabo noma zifeyilile. Empeleni nje njalo ngonyaka sihlangabezana nenkinga efana nekaNkk Shange ngabazali bezingane ezifunda uGrade 11 abafuna ukuthi zidluliselwe ngenkani kwaGrade 12 kulesi sikole,” kuchaza uNdlovu.
Uthe amaphepha abafundi awamakwa umuntu oyedwa kodwa kuthinteka abantu abaningi, okukhona phakathi othisha, nalowo oyinhloko obhekele isifundo ngasinye nekomiti labantu abayisigungu esiqinisekisa leyo miphumela kuze kuyoshaya kumhloli uqobo lwakhe.
“Anginqabi ukuthi umzali azoziqinisekisela yena ukuthi ingane yakhe isebenze kanjani. Sekuke kwenzeka omunye umzali wenza into efanayo, ngamtshela ukuthi indlela iqala kumhloli ngoba nami angiziphethe. Osekusuke kwenziwe emphumeleni yabafundi, kusuke kungasathinti mina ngedwa,” kusho yena.
Uthe umtshelile noNkk Shange ukuthi uma enezikhalo, akaqale kumhloli ngoba zonke izinto zigcina kuyena ezithinta imiphumela yabafundi. Mayelana nokuthi uNkk Shange akafundile, uthe umchazelile ukuthi akulula ukuthi akuzwisise kalula akushoyo ngoba akayena uthisha.
Wenze isibonelo ngokuthi ngeke yena aphikisana nabantu abafundele ezobuchwepheshe ngoba akazilutho ngalowo mkhakha.
“Ngiyaye ngibeluleke abazali ngokuthi kungcono umntwana afeyile uGrade 11 kunokuthi afeyile uGrade 12 ngoba yilapho ehlukumezeka khona kakhulu engeke esaphuma ngisho nasephepheni,” kuphawula uNdlovu.